Ingdọ aka na ntị P3D ọrụ
Ingdọ aka na ntị P3D ọrụ 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1067
Ka ọ dị ugbu a amam n’aka na ọtụtụ n’ime unu anụla gbasara Dovetail kagbuo Flight Sim World (FSW) Agaghị m ekwupụta ihe kpatara m ji chee na mmemme a kụrụ afọ n’ala. Ihe na-echegbu onwe ya bụ ihe ndị mere na peeji facebook nke FSW n'ime ọnwa abụọ gara aga tupu ha akwụsị ngwaahịa ahụ. Afterbọchị ọbụla kwa ụbọchị Dovetail na FSW na-achọ inweta ahịa. N’ezie ha na-ekwu maka ọdịnihu nke igwe ụgbọ elu ụbọchị abụọ tupu ha ekwupụta ngwaahịa agaghịzi emepe.
Ya mere, ihe na-echegbu m bụ Dovetail aghaghịrịrị nkwubi okwu n'oge a na ha na-aga ịkwanye nkwụnye ahụ. Ha na-anwa inweta ego karia ime ya site na onye obula onye nzuzu iji kpo nko. Nke a ga-abụ mgbalị iji kwụ akwụ ụgwọ site n'ịzụta ikike ntụrụndụ sitere na Microsoft. N'eziokwu ha ka nwere FSW maka ire ere na steeti 24th. Kedu ihe nke ahụ na-agwa gị?
Ụjọ m bụ, ha nwere ike ịnwa ịga Lockheed Martin n'ihi na ọ bụghị ịmanye ikikere ha iji weghachite ihe ndị ahụ furu efu site n'ikwu na ọ kpatara ụda nke FSW. Nke a ga - amanye Lockheed Martin ka ọ wepu License Academy ma merụọ ọtụtụ ndị ọrụ njedebe ma ọ bụ na ha ga - ebuli ọnụahịa iji kwụọ ụgwọ nkwupụta ụta.
Dovetail bụ nnukwu unyi na mpaghara anyị ma mebie emebi ntụrụndụ anyị ugbua. Nhọrọ nke ozo gha bu ka ejigide Lockheed ka oghapu ihe nkwuputa na nke ozo nke ESP ozo na simulation flight. Ọ bụrụ na nke a emee, X Plane ga-aghọ ihe egwuregwu na PC Flight Simulation. Monodị monopoly dị otú ahụ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya maka onye ọrụ njedebe. Anyị kwesịrị ọ dịkarịa ala ụlọ ọrụ ịme anwansị ụgbọ elu abụọ dị adị, iji kwalite asọmpi ahụike, yana mmepe nke atọ
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: pauand2, donran1
Ndumodu ikpe azu: site DRCW. Reason: Forgot to mention third party developers
Ingdọ aka na ntị P3D ọrụ 2 afọ 1 ọnwa gara aga #1090
Ive kwuru otu ihe ahụ, ụdị isi ya mgbe ya na ndị ọzọ gbasara FSX na imuta ihe mmemme site na elu ala ihe ikpeazu? afọ iri. Ọtụtụ n'ime anyị maara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ tupu GameSpy pụọ na ọ ga-eme. Ọnọdụ a bụ nnọọ otu ihe ahụ dịka ị nwere ọtụtụ ndị na - achọ ụlọ ọrụ ahụ ihe omume na - adịghị mma. Ekwenyere m n'onwe m na ihe karịrị nde awa awa mmadụ na-ewere usoro a n'ọkwa ọ bụ ugbu a njiri ga-ekwe omume na ọtụtụ 28% nke payware ụgbọ elu 40% ịkwụ ụgwọ dị mma na ihe ndị ọzọ bụ ndị ọzọ nọ na freeware na shareware. nke ahụ na-etinye ogo na mbọ kachasị. Enwere ọtụtụ mmebi iwu n'ọhịa ego. Agaghị m ekwupụta aha, mana nke ahụ bụ iji chebe saịtị a nke enweghị ihe gbasara ya na nkwupụta. You nwere ụlọ ọrụ na-ewepụta ezigbo ụgwọ a na-akwụ ụgwọ, mana eea ​​enwere ọtụtụ ihe na-enwu ọkụ na fighter a mara mma na ihe agha dị na ya gụnyere, KAMA ịgbara ndị ọrụ / ịzụrụ ụgwọ ụgwọ na koodu maka afọ ọ bụla n'ihe ị zụrụ wee bụrụ eziokwu ị ka a na-eziga na nnọkọ maka azịza. Ha na-enweta ego anyị na-aza ajụjụ ndị ahụ ma na-edozi nsogbu ndị ha kwesịrị ịbụ na-edozi. Ahapụ webụsaịtị, FSXA FSX gold FSX, enwere saịtị n'ịntanetị onye ọ bụla maara nke ọma, ha nwere FSX Goolu maka ire ere n’elu $ 200.00 US. Nke ahụ bụ ezigbo ọdachi. Ma mgbe ahụ enwere saịtị ndị dị elu dị ka nke a na-enye shit maka ihe na-eme ma ga-eme ihe ọ bụla kwere omume iji mee ka ihe dị mfe nghọta ma na-emeziwanye ihe mgbe niile. M na-egosi otu n'ime saịtị a hụrụla n'ime afọ iri ka ị jụọ, Kedu ihe ị ga - achọ ịhụ mgbe a kwalitere, ọ bụ ihe pụrụ iche ugbu a na oge a. M na-ekele ndị niile nọ n’iru anyị, ọ ga-abịa n’azụ anyị iji mee ka nke a dị ndụ, ma gaa n’ihu ịmụ ins na mpụga mmemme ahụ iji mụta usoro ahụ. Ime simulation emeela ka ọtụtụ ndị mmadụ nọrọ n'ụlọ ọrụ na-ebugharị ụgbọ elu karịa ihe ọ bụla ọzọ n'akụkọ ihe mere eme. Imirikiti ndị kwụsịrị ịga ebe a ga-aga ụlọ akwụkwọ ụgbọ elu. Ọdịnihu dị elu nke ụgbọ elu anaghị eme ka ihe na-agwụ ike, naanị ndị siri ike ga-alanarị na ụlọ ọrụ ahụ n'ihi na ndị na-abịa naanị maka uru na naanị onwe ha n'uche na ọ bụghị ụgbọ elu sim ndị okike, ndị ọrụ, ndị mmepe, wdg. Ndị njem ụgbọ elu ha ga-ada, enwere m ike ijide gị nke ahụ. Enwere m ike icheta oge mbụ ụgbọ elu MS ụgbọ ala pụtara, ọ dị ọhụrụ na ọ ka nke ukwuu, ma ugbu a ana m eleghachi anya azụ na mmemme ndị ahụ dịka ntọala dịka ụzọ PONG si buru ụzọ na-aga n'ihu. Rụ ntọala siri ike nke ga-akwado ụlọ ahụ, mee ka o sie ike ma sie ike iji wee na-edozi ihe niile abụghị otu, n’ihi na ọ bụrụ n’ịghị otu ihe ahụ ga-ewetara ụlọ ahụ, Daalụ RIKOOOO maka ebe dị mma, ebe anyị nwere ike ijikota onu ma mee sim ka odi nma karie. Nwee ụgbọ elu adịghị mma.Semper Fidelis. Ọ bụrụ na mgbakwunye ahụ gosipụtara, mara nke ahụ ndịna-emeputa na 300G intel duo ihe dị ka afọ 7 na-agba ọsọ windo 7
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: DRCW, donran1
Oge ike page: 0.224 sekọnd